उदिप र आँचलले गरे पल शाहको यती धेरै तारिफ (भिडियोसहित)
May 25, 2020 1905
भर्खरै नायीका आँचलसंग विवाह गरेका डा उदिप श्रेष्ठले अरुले आफुहरुका बारेमा जे भनेपनि केही फरक नपर्ने बताएका छन् । उनले मिडियामा आफुहरुका बारेमा आएका विभिन्न कुराह’रुका बारेमा आफुहरु जानकार भएपनि त्यसले केही फरक नपार्ने बताएका छन् ।
उनले एउटा टेलिभि’जनमा दिएको अन्तरवार्ताका क्रममा उनले त्यस्तो प्रतिकृया दिएका हुन् । हामी दुई जना’बीचमा समस्या भए त्यसले प्रभाव पार्ने हो, अरुले निम्त्याएको कन्ट्रोभर्सीले के फरक पार्छ र ? उनले भने, हामी विचको सम्बन्ध झन गाढा भइरहेको छ ।
आँचलले आफुहरुको समबन्धका विष’यमा भएको कुराकानी सानो विषय भएको बताउँदै, आफुहरुलाई लकडाउनका कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको पीडाले आफुहरुलाई दुखी बनाएको बताएकी छन् ।
उनले आफ्नो बारेमा लकडाउनका समयमा निका’लेको त्यस्तो विगतका कुराले त्यसरी लेख्नेहरु’लाई दया लाग्ने बताइन् । एउटा टेलिभिजनमा आफ्ना श्रीमानसंग आएकी आँचलले विवाह पछि यसरी अरु नायीकाहरुको बारेमा भने आएको आफुलाई थाहा नभएको बताइन् ।
भर्खरै विवाह भएर गएकी मलाई लकडाउनको समयमा परिवारकै सदस्यसंग समय विताइरहेको बेलामा यसरी प्रहार गर्नु यातना भएको बताइन्, उनले भनिन्’, यस्तो यातना किन दिएको होला, त्यसले हामीलाई निकै अचम्म लाग्यो ।’
यता उदिपले आफ्ना बारेमा आ’फ्ना साथी र आँचललाई सबैकुरा थाहा भएका कारण वाहिर आएका विषयले कुने प्रभाव नपारेको बताए । उनले भने, आँचल, मेरो परिवार र साथीह’रुले म कस्तो छु भन्ने थाहा छ, अरुले त्यसरी लेख्दा मलाई केही फरक पर्दैन ।
ववाह पछि आफुह’रुको कहिल्यै ठाक’ठुक पनि नपरेको बताएकी आँचलले भनिन्, हेलो मिडिया हेर्नुस् हामी संगै छौं, किन आँचलको डिभोर्ष भनेर लेख्नुहुन्छ ? उनले त्यस्ता विषयले आफुह’रुको सम्बन्ध झन गाढा भएको बताइन् । उनले आफु कसैको विषय’लाई टेकु नगएको पनि स्पष्ट पारेकी छन् ।
उनले भनिन्, लकडाउनका का’रण अहिले टेकु जान सक्दिन तर मैले कुन मिडिया दर्ता छ कुन छैन भन्ने कुरा मैले सबै अनुस’न्धान गरिसकेकी छु । लकडाउन पछि भने यो वि’षय लिएर अवश्य जान्छु ।
उनले कहि’ले काँही भने आफुलाई किन यस्तो फिल्डमा लागेछु भन्ने लाग्छ । तर उदिपले भने त्यस्ता कुराले के’ही फरक नपार्ने बताउँछन् । हेर्नुहोस् भिडियो मा ….
Prevमृ’त्यु भएको ८ दिनपछि नेपालमा १ जनामा कोरोना पुष्टि
Nextभारतको ऐति’हासिक नक्सामा पनि लिपुलेक र लिम्पिया’धुरा नेपाल’कै